हाम्रो नेपाल मा : HAMRO NEPAL MA: नेपालीहरुको ढोंगी राष्टियता
वसन्त बलामी January 15, 2010 at 1:39 PM
नेपालीहरु नै राष्टवादी छैनन भने भुत्रो हुन्छ नेपाल को राष्टिय स्वाधीनता ? निश्कर्ष निराषाजनक भए पनि यथार्थ यहि नै हो । व्यक्ति पिच्छे राष्ट्रयताको परिभाषा भिन्न देखिँदै गएको वर्तमानको चित्र त यही नै हो । हावा जीको विचारमा पूर्णत समर्थन गर्छु । तर हावा जी कसो गरे भइएला पक्का राष्ट्रवादी ?यसो अाइडिया पनि दिनुपरो नि।
Dhruba Panthi January 15, 2010 at 6:23 PM
नेपाल भन्ने राष्ट रह्यो भने त्यो जनजातिकै जुझारुपनाले मात्रै रहन्छ भन्ने हावा ब्रोको विचारमा मेरो पनि सहमति। उत्तरका होउन् कि दक्षिणका, बाहुनहरुको मलाई पनि भर छैन तर म पनि के ठान्छु भने कतिपय बाहुनहरु असल र उत्कृष्ट पनि हुन्छन् जस्तो कि म ;) कुरो जेसुकै गरे पनि जातीय सहिष्णुता चाहिँ नमासौँ है। भिन्न विचार राखेकै कारण कसैको नाक काट्ने तालिवानी शैली नदोहोरियोस्।
एकल यात्री January 16, 2010 at 9:04 AM
राष्ट्रियतालाई जातजातिसँग तुलना गरेर हेर्नु कत्तिको ठीक हो, i don't know.
जुनसुकै जातजातिका भए पनि पक्का राष्ट्रवादी नेपाली ज्यादै थोरै छन् मेरो ठम्याइमा । यद्यपि पक्का राष्ट्रवादी कस्लाई भन्ने मलाई पनि थाहा छैन ।
पुष्प January 16, 2010 at 7:39 PM
तीतो तर मीठो पस्किनुभयो हावाजीले ।
शेरे January 16, 2010 at 11:02 PM
के हो रास्त्रियता? यसलाई खै हामि मध्ये कसैले नि राम्ररि बुझ्या जस्तो लाघेन तर ज भए नि पड्दा गहन बिसय नि हलुका जस्तो लाग्यो..एक हिसाबले रमाईलो भयो भन्नु पर्यो.
पुष्प January 17, 2010 at 3:05 AM
पुष्प January 17, 2010 at 3:06 AM
एकछिन आफुलाई बिर्सेर आफ्नो देशलाई सम्झनुस्, त्यही हो राष्ट्रियता अनि राष्ट्रवाद ।
Ashesh January 17, 2010 at 11:11 AM
असल र उत्कृष्ट वाहुनजी, तपाईको यो सत् चरित्र कायमै राख्नु होला है । हा हा हा खुव हँसायो माथिको वाहुनको कुराले एकछिन...
'जस्तो कि म'
हा हा हा हा । म पनि तपाईँजस्तै वाहुन हुँ है!!
लेखको कुरो गर्छु है अव । नेपालमा वस्ने कोहि पनि राष्ट्रवादी नै छैनन् भन्ने statement लाई जवर्जस्ती पुष्टीगर्न खोजेजस्तो लाग्यो है मलाई त । हुनत पक्का राष्ट्रवादीको मापदण्ड के हुनुपर्ने हो त्यो त मलाई थाहा छैन तर एउटा कुरोलाई पुष्टीगर्न खोज्दा अरू धेरै कुराहरू ओझेलमा नि परेका हुन् कि??
Basanta January 18, 2010 at 5:09 AM
--लेख मननीय छ! हामीले एउटा गम्भिर आत्मचिन्तन/आत्मसमीक्षा गर्नु र आफूलाई बदल्नुको विकल्प छैन।
यति भन्दा-भन्दै पनि म आफूचाहिँ पक्का पहाडी बाहुन-त्याँ'माथि काठमाण्डौंकै हुँदा-हुँदै पनि एकदम राष्ट्रवादी हुँ भन्ने कुरामा मलाई शंका छैन:)
जय होस् नेपालको!
HAWA January 18, 2010 at 8:11 AM
धन्यबाद साथीहरु, सुक्रबार मनमा लागेको कुरा धेरै बिचार नगरीकनै टासेको थिए.. अलि बढी नै स्मार्ट हुन् खोजेर लेखेछु.. अब धेरै गालि पनि खान तयार भएरै बसेको थिए.. लोड शेडिंग ले गर्दा बल्ल आज ब्लग हेर्न पाए.. साथीहरु कसैले पनि गालि गर्नु भएनछ अलि बोर लाग्यो.. गालि नखाई चित्तै बुझ्दैन आफुलाई.. डोज नै पुग्दैन
जे होस्, साथीहरुले धेरै गम्भीर प्रस्नहरु पनि उठाउनु भाको छ.. म पनि मनन गर्दै छु.. तर फेरी बत्ती जाने बेला भैसकेछ..बिजुली पनि अब भारत् ले दिए बत्ति बल्छ अरे भारतले नदिए बल्दैन अरे.. एस्तो छ हाम्रो राष्टिय स्वाधीनता..साथीहरुको अत्यन्त मननीय टिप्पणीहरुको लागि फेरी पनि धन्यबाद र आभार
HAWA January 19, 2010 at 7:40 AM
बसन्त जी, प्रश्न अलि गारो सोध्नुभो । जाँच मा जस्तो बैकल्पिक प्रश्नको व्यवस्था छ कि ? अब आफैले बिषय उठान् गरेपछि केही त भन्नैपर्यो । मलाई लाग्छ राष्टवाद भन्नाले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ लाग्नु हो । नेपालको सन्दर्भमा, सबैभन्दा पहिला नेपाल भारत बीच को सीमानामा अन्तराष्टिय मापदण्ड अनुसार सीमा सुरक्षा सैनिक सहित काँडेतार लगाउनु हो ।
ध्रुब जी, मलाई के लाग्छ भने राजनीतिक र सन्चार क्षेत्र जस्ता सधै चर्चामा आउने वा भिजिबल ठाउँहरुको नेतृत्वमा जनजातिहरुलाई कार्यकारी तहमा आउन दिनुपर्छ । भन्नाले प्रत्येक दल र सरकारमा भएका प्रमुख कार्यकारी र सन्चार माध्यममा हाललाई जनजातिबाट व्यापक प्रतिनीधित्व हुनुपर्छ । जनजातिको मात्र हैन् दलित वर्ग पनि नेतृत्व मा हुनुपर्छ । तेसो भयो भने कतिपय आन्तरिक जातिय समस्या आफै हल हुन्छ । अनि शायद बिदेशीहरुले पनि नेपाललाई तेति हेप्न र चलखेल गर्न सक्दैनथे कि ?
एकल यात्री जी, जातजातिसंग राष्टियताको तुलना गर्नु तपाईले भनेजस्तै उपयुक्त नहोला । जो बढी चलायमान् वा मोबाईल हुन्छन् जुन सुकै जातिका भए पनि उनेरुको लागि कुनै एक स्थानका प्रति बढी ममत्व राख्नु उपयुक्त हुदैन् । मैले जनजातिलाई बढी राष्टवादी त्यस अर्थमा भनेको कि जनजातिहरु कबिला संस्कृतिसंग नजिक भएकाले उनेरु आफ्नो क्षेत्रको सुरक्षाको लागि लडेको देखिएको छ । तर कतिपय कुरा तपाईले भनेजस्तै व्यक्तिपिच्छे फरक पनि हुन्छ । मैले जेनरलाईजेशन तेसैले पनि भनेको हो । जेनरलाईजेशन भन्ने बित्तिकै त्यो कुनै निश्चित सन्दर्भमा गलत पनि हुन सक्छ ।
पुष्प जी, करेलाको तरकारी तितो भएपनि बनाउन जान्यो भने मिठो पनि हुन्छ र ज्यानलाई फाईदा पनि गर्छ भन्छन् नि त ।
धन्यवाद शेरे जी, मेरो कुरालाई धेरै गम्भीरतापुर्वक वा सिरीयसली नलिदिनुभएकोमा । म कुनै बिशेषज्ञ नभएकोले मेरा कुराहरु हलुका हुन सक्ने सम्भावना पनि बढी नै हुन्छ । मेरो बिचारमा राष्टियता भन्नाले सम्बन्धित राष्टको सन्चालन त्यस राष्टभित्रका जनता र तिनका प्रतिनीधिले सन्चालन गर्ने पाउनुपर्छ भन्ने भावना हो ।
अशेष बाहुन जी, हा हा हा तर मैले आफु मात्रै सतचरित्र को छु भन्न पनि गारो छ । हरेक रात सपनामा क कसले आएर मेरो पनि ब्रम्हचर्य भंग गरिदिन्छन् । अब कसरी भनु कि म सत्चरित्र छु ।
मैले माथि भनेजस्तै मेरो बिचारमा राष्टवादी भनेको हाम्रो भन्ने भावना हो । अरुलाई गाली गर्नु मात्रै पनि राष्टवाद होईन् । हाम्रो देश गरिब नै छ भने पनि हामी आफुले आर्जन नगरेको कुनै कुरा कसैले सित्तैमा दियो भने पनि लिन्न भन्ने साहस हो । जब अरुको नुन सित्तैमा खाईन्छ अनि उसको नुनको सोझो गर्न बाध्य भईन्छ ।
बसन्त जी, धन्यवाद...तर एसपाली तपाईले पनि पाखुरा सुर्कन बिर्सनु भो । मैले तपाईकै व्लगमा पनि लेखेको थिए । तपाई जापानमा हुनुहुन्छ भन्दैमा कम राष्टवादी र म नेपालमा छु भन्दैमा बढी राष्टवादी हुन्छु भन्ने पनि होईन् । आज यो देशका मानिसहरुको छाक कसको पैसाले टरेको छ ? बरु त्यसको उल्टो देशमै बसेर देशघाती काम गर्नेहरु धेरै छन् ।
तर म एउटा कुरामा प्रष्ट छु यदि नेपालमा नया व्यवस्था आएको हो भने त्यसको सन्चालन नयाँ मानिसहरुले नै गर्नुपर्दछ । हैन भने यो पुरानै व्यवस्था कस्मेटिक चेन्ज भएर नया रुपमा आएको हो र नयाँ व्यवस्थाको खोजी हुन्छ ।
Nepaliko Aawaz January 19, 2010 at 6:34 PM
तितो सत्य .......
लेकाली January 19, 2010 at 9:36 PM
दौतरीले सर्बोच्चताको खेदो खन्याखन्यै हावा ब्रोले खेदोको बिरुद्ध आवाज दरो बनाको बनै क्या अर्ने होला? रणभुल्ल, तिल्लबिल्ल र ट्वाके खाएर झुल्ल म त। कस्को कुरा कता पट्याउनु ? ए हरीराम बैठके कहाँ छ हँ तिम्रो बाहुन भाको जनै ? लौन जे पर्ला पर्ला देखाइदेउ । आजकाल सुन्दै संयन्त्र नामको षड्यन्त्र पनि बनेको छ रे। बाङे भए श्री पशुपतीले रक्षा अरुन् भन्थे बिचरा यी (ष)संयन्त्रबादिले राष्ट्र बेचेर नै राष्ट्रबादी बन्ने त होलान् ।
HAWA January 20, 2010 at 8:30 AM
नेपाली को आवाज ब्रो, हाम्रो समस्या त्यै छ के भन्ने के गर्ने ? ब्यबस्था परिबर्तन भो तर संचालक उही भए..अनुहार नफेरी जतिसुकै आदर्स ब्यबस्था राखेर मात्र काम दिनेवाला छैन..
समस्या यहि देख्छु म
हाहाहा लेकाली ब्रो, बडो चोटिलो दिनु भो जनैधारीहरुलाई.. तेसो त जनैधारी हुनु नै पनि अपराध होइन.. तर जनैधारिहरुले म मात्रै बाठो छु, म मात्र समन्वयकारी छु, म मात्र नेतृत्व दिन सक्छु भन्ने अहम गरेकोले पनि एस्तो अवस्था आएको हो..हिजो पो जनैधारी हरुले मात्र लेख पढ गर्न जान्दथे.. अब त अरुले पनि जानिसके..तेसैले अरुले पनि नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ भनेका हुन्
अनि ब्रो, दौतरी का साथीहरुको पनि आआफ्नै बिचार छ.. एउटा समानता चाहि उहाहरु माओबादीले खान्छ भनेर डराउनुभाको जस्तो छ.. मेरो भनाइ चाहि जुन सुकै बादी भए पनि नया अनुहार हुनुपर्छ भन्ने हो.. माओबादी प्रति तुलनात्मक सहानुभुती यस कारण ले हो कि उसले अरु पार्टीले भन्दा बढी उपेक्षित् बर्गलाइ अघि सारेको छ.